Baarlamanka Dalka Ingiriiska Oo Laga Hakiyey Shaqadiisii, Dhawaana La Kala Diri Doono & Sababta Loo Cuskadey | Himilo Media Group
Baarlamanka Dalka Ingiriiska Oo Laga Hakiyey Shaqadiisii, Dhawaana La Kala Diri Doono & Sababta Loo Cuskadey
London, (Himilo)-Boqoradda dalka Ingiriiska, Elizabeth ayaa ansixisay codsi uga yimid raysul wasaaraha cusub ee waddankaas, Boris Johnson, kaasoo dalbaday in hakad la galiyo howlaha baarlamaanka.
Golaha ayaa ayaa la kala diri doonaa maalmo yar ka dib marka ay xildhibaannada bisha sagaalaad dib uga soo laabtaan fasaxii ay ku maqnaayeen.
Shaqada aqalka ayaa hakad ku jiri doonta ilaa marka ay dhowr toddobaad oo keliya ka hadhsan yihiin waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay in Britain ay ku gaadho heshiiska ay uga baxeyso midowga Yurub.
Waxa uu go’aanka ku saabsan hakinta shaqada baarlamaanka hirgeli karaa inta u dhaxeysa 9-ka ilaa 12-ka bisha Sibtember wuxuuna ku eg yahay badhtamaha bisha Oktoober ee sanadkan.
Boris Johnson ayaa sheegay in khudbadda boqorada ay qabsoomi doonto marka dib loo howlgeliyo Baarlamaanka, oo ku beegan 14-ka bisha Oktoober, waxaanu sheegay inay markaas ay ka hadli doonto Ajandihiisa xiisaha badan leh”.
Hase yeeshee arrintan ayaa ka dhigan in uu yaraan doono waqtiga ay xildhibaanada u heystaan inay ansixiyaan sharci hor istaagaya in Britain ay heshiis la’aan uga baxdo midowga Yurub, waqtigaasoo ku eg 31-ka bisha Oktober.
Afhayeenka Baarlamaanka Ingiriiska John Bercow ayaa sheegay in tallaabadan ay ahayd “Cadho dastuuri ah”. Mr Bercow oo dhaqan ahaan aan ka hadlin arrimaha siyaasadda ayaa intaas ku daray, “Way dhacday arrintani, waxayna ujeeddadu tahay in si indho la’aan ah baarlamaanka looga hor istaago inay ka doodaan waajibaadkooda ku saabsan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub”.